Imisipha Yokuhlinzwa, Izinaliti Zokuhlinzwa Nemisipha, Ikhithi Yokuhlinzwa Yesikhumba - MOFOLO
IMofolo Medical Technology ezinikele ekuthuthukisweni, ekukhiqizweni nasekuthunyelweni kwemikhiqizo esezingeni eliphakeme yezokwelapha.
Kuthatha indawo engamamitha-skwele angama-36,000, indawo yesimanje yokuhlanza indawo engamamitha-skwele angama-5,000, kanye nabasebenzi abangama-350.
Ikakhulu kufaka uchungechunge lwamanzi, uchungechunge lokuphefumula lwe-anesthesia, uchungechunge lwe-urinary, uchungechunge lwe-catheter yezokwelapha kanye nochungechunge lwesipanji sezokwelapha.
Alahlwayo kuhlinzwa ngomlomo isiponji swab induku
I-swab yokunakekelwa ngomlomo iqukethe ithiphu nenduku. Ithiphu lihlala lenziwe ngesipanji esinekhanda le-foam noma indwangu engalukiwe. Futhi isibambo sepulasitiki, sokhuni noma njengoba udinga. Umbala uyakhethwa. Umumo wenziwe ngezifiso, kungaba unxantathu, iplamu, ukuqhakaza, izinkanyezi, amazombe, njll. Usayizi, ukuminyana nakho kungenziwa ngezifiso njengoba ufisa. Ubude futhi bungakhethwa. I-swab esiyikhiqizile inezinhlobo ezingaba ngu-30 ezikhethekile zomkhakha wezokwelapha, ukunakekelwa kwempilo nsuku zonke, ukusetshenziswa kokuhlanzwa kwe-optical ne-electronics. Umuzwa othambile, omuhle wokuthinta, comfo ...
Izinsizakusebenza Zokuphefumula Zokuphefumula (i-Respiratory Exerciser) zisiza ukuthuthukisa, ukuthuthukisa kanye nokugcina ukuqina komzimba. Lesi Sisetshenziswa Sokuphefumula Esiphefumulayo (i-Respiratory Exerciser) senzelwe i-gymnastics yokuphefumula ezimele futhi elawulwayo. Ikakhulu, ifanele iziguli ezilele embhedeni. Ngakho-ke, ukukha phezulu futhi yingakho ukuphefumula okunganele kuholela ekungeneni ngokwanele kwezingxenye eziphansi zamaphaphu. Kungenzeka, ukuthi kuzoba nokuqoqwa kwemfihlo (ikakhulukazi iphleji ...
Njengohlelo lwamanzi okuvala isilonda, luhlala lusetshenziselwa ukukhipha nokugcina uketshezi ngengcindezi engemihle, ezigulini eziceliwe ukwamukela uhlobo lokuvala amanzi ngemuva kwezinhlobo ezahlukahlukene zokusebenza. Futhi ngokubhekisele kule ndlela, kunezeluleko ezimbalwa. A. Ishubhu lokuhambisa amanzi elisuka esilondeni, indawo efaneleke kakhulu ye-3 cm kude nesilonda. B. Imikhawulo yesiqeshana seshubhu lokuhambisa amanzi ubude obufanele bokungcwatshwa ngaphakathi kwesilonda. C. Ingabe isilonda suture futhi silungise ishubhu lokuhambisa amanzi ...
Medical Ibanga PVC elingenalutho Kuvaliwe isilonda Drainage ...
Uhlelo Lokugeleza Kwamanxeba Okuvaliwe Uhlobo Olungenalutho lwakhiwe izingxenye eziningana kufaka phakathi ithubhu, isitsha, i-Negative pressure drainage body main kanye ne-way-way valve eyodwa yenziwe nge-silicone yezokwelapha noma i-PVC. yenziwe nge-PP, i-PVC noma i-ABS. Isiphethu senziwe ngensimbi engagqwali. I-evacuator inezinhlobo eziningana – 200cc noma 400cc njalonjalo, futhi kuhlala kunokukhetha okuningi ngosayizi wetrocar, kusuka ku-7FR kuye ku-18FR. Amasiko amukelekile futhi. Futhi ...
I-latex foley catheter yenziwa nge-latex ebangeni lezokwelapha elingu-100% elinokuvumelana okuphezulu. Siqukethe tube abicah camera nge X-ray uphenyo umugqa kanye PVC tip ngombala ohlukile. Ishubhu liyi-270mm (yezingane nowesifazane) ne-400mm (yomuntu omdala wesilisa). Futhi ichopho lisezinhlotsheni ezahlukahlukene futhi — indlela e-1, 2-indlela no-3-way; i-couvelaire, i-dufour, i-delinotte, i-haematuria, i-couvelaire .. Yini enye, ama-ballons ayatholakala cc ehlukile. I-coleter ye-Foley isetshenziswa eminyangweni ye-urology, imithi yangaphakathi ...
Ipayipi le-silicone foley liqukethe ishubhu eliboshwe ngabicah ngomugqa womseshi we-X-ray kanye ne-PVC tip ngemibala ehlukene. Ubude beshubhu buhlala bungu-270mm (bezingane nabesifazane) kanye no-400mm (owesilisa omdala) .Umugqa womseshi we-X-ray, okhonjiswe ngombala wokukhomba usayizi ohluka ukusuka ku-6 FR kuye ku-28FR. Futhi ithiphu inezinhlobo ezahlukahlukene futhi — indlela e-1, 2-indlela no-3-way. Ngaphezu kwalokho, ama-ballon ayatholakala nge-3-5cc, 5-10cc, 5-15cc, 15-30cc. Amasiko amukelekile futhi. I-catheter ye-Foley isetshenziswa eminyangweni ...
I-Polyglactin suture i-suture eboshiwe futhi eboshwe eyenziwe yokwenziwa ngombala we-violet futhi yenziwa nge-polyglycolic acid ene-polycaprolactone ne-calcium stearate enamathela. I-Polyglactin 910 sutures igcina amandla we-tensile acishe abe ngu-70% wamandla okuqala ezinsukwini eziyi-14 zokufakwa.Ukuphindaphinda kwezicubu zayo kufomu elincane kakhulu ngesikhathi senqubo yokumunca. Ukumuncwa kwenzeka ngokuqhubeka kwesenzo se-hydrolytic, kuqedwe phakathi kwezinsuku ezingama-56-70. Futhi isetshenziswa kaningi kwizicubu ze-coaptati ...